Ndakazovasvira mai TINO – Vanoda Zvinhu
Yanga iri SATURDAY 16 NOVEMBER 2014 pandanga ndakablokwa paya. Ndaiva zvangu pabasa pangu zvangu ndichirova basa nemazvo semunhu aishandira bonus chero zvazvo yakaramba kuuuya. Ndakataura nekahure kanonzi Madeline kanoshanda paGulf paB61 apa kachidawo mboro hombe yadai kuita mbiri iyi.
Ndakaendapo ndichida kukapicker ndobva karamba zvako apa mboro yanga yamira zvayo. Ndakabvapo ndakananga ku Office kwangu baba ndokusvika ndokupedzisa tumaworks twangu ndokuvhetemesa zvangu Hilux yebasa ndakananga paComfort zvangu paden.
Ndakasvika paden shaaaa ndokuona mai Tino aaaa vakapomba only skin tyt nekablouse kanga kaka shepa mukaka wemwana. Uuuuuu apa mai iyi ine dako mutakunanzva chaiwo. Ndakarwerwa rute ndokupinda zvangu muden mangu apa mboro yakangomira kubva kutown kwandakapusiswa na Madeline . Ndakagaya kuti regai ndione futi dako ramai Tino
ndokubuda zvangu panze ndichirova mutetenerwa (nzungu dzakakangwa dzine salt). Ndakasvika panze ndikaona shasha ichifara ndikaziva kuti yazviona kuti Doctorlove atapirirwa nemuviri wayo.
Shasha nekuda mboro yakatanga kuti aaaa ndati nhasi ndifurwe zvangu nemhepo mukoma wenyu aenda kumusha nembeu kudai saka ndakapfeka so musatya henyu. Anotodzoka zvake after 3 weeks bkz anoda kusiya abatsira vana amai kurima. Ndakaseka zvangu nechemumoyo ndokudzokera muden kundoona kuti macondom how far ndikaona mune 5 ndobva ndadzokera
panze ndokugara zvangu. Vakatanga tumubvunzo twavo mai Tino zvikanzi “ bamudiki ko sei nhasi mauya mega kudai, mazuva ese aya munosiuya nevasikana wani asi nhasi marovera kulodge” heeheeda vakadaro vachirovanisa maoko avo
Ini zvangu nokuda beche ndakangoti nhasi ndauya ndisina ndichiziva zvangu kuti NHASI YESE NDEYA MAI TINO ndaneta nekusvira mabvakure asikana imi muri pano zvenyu. Vakarova chikweeeee mai Tino zvikanzi nekanzwi katet tete “bamudiki haikona kuda kundifadza nenhema apa. itai mamwe majokes manzwa haikona kufadza vamwe mahara apa. Munenge
munosvirisa vo imi. Pose pamunosvira ndinenge ndakagara pahwindo penyu ndichinzwa vasikana vachichemerera. Ndakanguva ndanzwa nemoyo mufunge henyu. Mukoma wenyu ihuku chaiyo haaagone kusvira uyu aaaaa” Ndakapinda muden bkz mboro yanga yorwadza nekumira ndokutanga zvangu kubika bika tu rice twangu fro 6-7pm. Ndakatyora muden kusvika
kuma 8 shasha ndobva yagaya kuti ndavharwa.
Vakauya ndokuvhura door ndokupinda ndokumira padhuze dhuze nedoor ndokut “GOOD NYT BAMUDIKI SEE YOU TOMORROW” ndobva varova U-TUIRN. DAKO racho kani uuuuuu ayaaaaa ndobva ndatomisa mboro kana ndari funga so. Ndakajamba baba kubva pabed pangu ndokusvikoiti pachiuno apa dzviiiii ndokuidhonzera mukati meden. Yakambopiripitika sei singadi so.
Yakati yadzisa ruoko rwayo kuzasi uku ndobva yagumha zimboro ranga ranzwa zvaro nokumira babaka. Ndakaona shasha ichindibatirira.
Ichinyenama nyenama so ndikaziva yaaaaaa shasha yanakirwa nesize yemboro. Takazombotaura here veduwe ndakatanga zvangu kuKISWA. Vakomana kune vanhu vanokisa vakomana zvinonyerekedza so kuita kunge uri kusvozva mboro iwe uchikiswa pamuromo chaipo. Ndakatanga zvanguwo ndokupinza ruoko mukaskin tyt kavo baba ndokutanga kutamba neka beans kavo baba. Ndakaona zimhoms richizvongonyoka so senyoka yarohwa musoro ndikaziva kuti eeee zviri kuifambira. Ndakatanga kupinza zvigunwe mukati mayo ndichiiita zvishomanana ndopandakanzwa mhoms yosuririra ndikaziva yanakirwa zvangu. Uuuuuuuu ndakaona shasha yondibvisa hembe yangu neTROUSE ndikaziva kuti zishondoooooooo ndorava kudiwa hapana chimwe apa. Varume hama ndakapfeka CONDOM rangu pazimboro rakamira ndikaona ziso ramai ava
rakati ndeeee zviya zvekushamisika kuti aaaa imboroooooo here iyi?. Vakauya maiTino ndokutanda kuigarira so baba. Ndakaona mai ichishatisa kumeso ichinyemwerera so ichida kutaura asi zvichiramba ndikaziva kuti zvaniko
kana munhu anakirwa anoda kungotaura zvisina maturo. Kukoira kwaisagonekwa zvako kwaiva kugoigarirawo zvawo. Ini ndini ndaitoita zvesimba ndiri pasi ipapo.
Ndakaipidigura mhoms ndobva yarara makumbo ari mudenga. Baba ndakanyudza mboro mukati kati mbichana mbichana. Ndakaona shasha ichidikitira ichisekerera kure kure ini ndokukoira zvangu mbichana mbichana ndisinga budise
mboro panze. Mai yakachemerera baba ndikati uuuuuu haindizivi iyi. Kuzoti ndoinyudza ndichibudisa ingasandimamira iyoyi? Mai Tino vanozipirwa nemboro vakomana uuuuuu aaayyaaaaa kuzipirwa kwamai TINO
kwakanyanya asikana aiwa Ndakatanga kunyudza mboro ndichiiibudisa mubeche baba nekaspeed vo kari nane zvako.
Ndakanzwa shasha yotanga kuchemerera chemerera so ndikati nhasi zvangu pakasabuda duzvi apa.
Ndakawedzera speed yangu yekukoira baba ndichiiita kunge spring so kuti zvomo nyaaaa zvomo nyaaaaa zvomo nyaaaa. Baba mai yaitiii chemerere chemerere yomboti ziiiii kwekanguva so. Ndakaramba ndichisviiira so ndikazonzwa shaaaaa yatai ziiiiiiii ndikaziva kuti eeeee yatunda manje. Takazorora kwekangauva kadiki so ndobva ndatanga nayo romance. Mai ine zemo riiri pahuma chaipo in less than 5 minutes yanga yoda futi. Ndakapfeka rimwe condomu baba ndokufongoresa zvangu. Baba kune vakadzi vanogona kufongora kwete zvenyu zvana Noreen. Vakomanaka ndakapinza mboro yangu yose baba ndokutanga nespeed yakapenga zvangu ndichisvira amai Tino. Uuuuuun kusura kwemunhu mudhafu kunonakidza akomana uuu.
Ndakasvira munhu kusvika munhu otanga kucomplainer hanzi bamudiki kani mirai ndiiiite weti. Mirai kani ndoda kuita duzvi chairo bamudiki kani aaa amana aiwa kani. Ndikati kana uchiweta wetera pano . iro duzvi rako iroro
riitire hako pano ndichakunha matuzvi acho kana ndatunda. Aaaa pakazombomamwa here munhu anakirwa nemboro. Unoziva kana mboro yanakira mukadzi so anonzwa senge duzvi soroda kubuda izvo kana mboro inenge yazipa zvekuzipa zviya.
Every part of your body inoita seyavhurwa so zvokuti unoita sewoda kubudisa anything kunyange wura chaiwo.
Ndiri pakati pekunakirwa neniwo ndakazooona shasha yatunda zvayo ini ndokubva ndakazongotundawo baba ndakapera simba muviri wese so. Ndakazvambarara nayo mhoms kusvika kuma 2am ndokutangana nayo futi baba apa ndopakazosviranwa zvekusviranwa zviya zvekuti kana neni ndakapera muto baba.
Next story Chinzwa kudya kwandakazoita beche ex wangu auya kusleepover
Previous story Mukadzi wemunhu anonaka varume eishhh